Ny Marina Saro-Dazain’Ilay Mpifindramonina, Mpikatroka ary Mpisolovava Momba ny DACA · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2018 14:34 GMT
Nanatevin-daharana ireo mpanandra-tenin'ny rariny ara-tsosialy, mpifindramonina ary mpitari-pivavahana an'arivony eo amin'ny Lapan'ny Fitsarana Tampony ho fanohanana ny DAPA/DACA, programan'ny filoha Obama ireo frera fransiskana avy ao amin'ny Kolejin'ny Anarana Masina sy ny fiangonana Md Camillus. SARIPIKA: Br. Christian Seno, OFM (CC BY 2.0)
Tsy mahataitra ny filazana farany nataon'ny fitondram-panjakana Trump momba ny politikan'ny Fanemorana ny Hetsika atao amin'ireo Ankizy Tonga (avy any ivelany) na Deferred Action for Childhood Arrivals policy (DACA). Tsy mahataitra toy izany ihany koa ny tsy fisian'ny politikan'ny fifindra-monina sy ny fampidirana ireo mpifindramonina ireo na ao Etazonia na aty ivelany.
Ho ahy amin'ny maha-mpialokaloka ahy sy mpisolovavan'ny fifindramonina ahy ihany koa, dia mametraka fanamby lehibe manan-danja ny toe-javatra ankehitriny, sady kihon-dalana ihany koa amin'ny tsy fiovan-javatra amin'izao fotoana. Ho sarotra ny hanoro hevitra amin'ny [olona arovana] ny dikan'ny fiafaran'ny DACA, sy ny endrika famadihana tsy maintsy ho tsapan-dry zareo. Saingy zava-dehibe ihany koa ny fangatahantsika mihoatra noho ny fanohizana ny politikam-panjakana misy amin'izao fotoana izay manome kara-panondro sy fahazoan-dalana hiasana fotsiny. Tsy maintsy hivoaka amin'ny lalany mahazatra ihany ny mpitsara hanamarinany ny fihetsiny na hamerany ny fanamelohan-tenany amin'ny fanaovana ho ara-dalàna izany fombafomba izany, saingy tsy misy ny lalan-kafa ivoahana eo amin'ny manodidina-ary miteny izany aho noho ny fananako [olona arovana] hahazo DACA. Tonga ankehitriny ny fotoana hahalalàna ny marina saro-dazaina.
Tsy midika ho manaiky ny lahatra ny eritreritra manaraka eto, ary tsy tokony hovakiana ho famelezana ny politika ratsin'ny fitondram-panjakana ankehitriny koa. Eritreritra niainga fotsiny amin'ny fotoana ankehitriny indrindra eo amin'ny tantara izy ireto.
Tsy endrika manandanja velively amin'ny satan'ny mpifindramonina ny DACA, izay nampiharina nanomboka tamin'ny taona 2012. Zara izy raha manome fahazoandalana hahazoana miasa vonjimaika sy “sata hodinihana amin'ny manaraka” ho an'ny mpifindramonina sasany, ary ireo zavatra roa ireo dia mety hofaranana amin'ny fotoana rehetra araka izay fanapahan-kevitry ny Sampandraharahan'ny Olompirenen'i Etazonia sy ny Fifindramonina.
Nahombiazana ihany koa ny DACA “tamin'ny fampifandrafesana ny mpifindramonina tsara sy mpifindramonina ratsy” nahatonga fahamontsanan'ny fahabetsahan'ny fampodiana olona tany amin'izay niaviany nandritra ny fotoana nitondran'i Obama, nefa niteraka fahatsapana tsara kokoa ho an'ireo “mpanonofy” ho mahazo tombondahiny amin'ny DACA—rehefa fantatra ireo mahazo tombondahiny amin'ny DACA—vintana tsara kokoa. Vintana tsara kokoa ny mandray anjara vonjimaika amin'ny toekarena sady rehefa tena poritra indrindra dia azo ampiasaina ho fitaovana politika [na hahazoana vato].
Amin'ny maha-mpifindramonina ahy ihany koa, dia sarotra ny manatsinjara ny fandevonana sy fangejana tondroin'ireo teny atao marika ireo, tsy fantatra akory raha mitondra zavatra tsara ny rivotra entin'ilay teny atao marika, tahaka ny hoe “mpanonofy”, na mety ho tena ratsy ihany koa, tahaka ny “wetback” (ilazana ireo mpifindramonina tsy manana taratasy). Mety hanohintohina amin'ny tanjon'ireo ezaka ireo ny tosika hijery kokoa ny mahaolona, tahaka ny anontaniana ireo mpanonofy ny haben'ny fitiavan-dry zareo ho any an-tsekoly sy hiasa, na, hijoro hanambara ny mahaolona azy ireo ijerena ny tanjona ara-politika.
Izany rehetra izany dia mifandray amin'ny Revirevy Amerikana sy izay rehetra entiny. Izao no lohahevitra: avelaontsika ireo ankizy mahantra ireo ho afa-miditra amin'ny fetintsika, farafaharatsiny ora vitsy monja; fa aza matahotra, ny ray aman-drenin'izy ireo ihany no hitana ny asam-panadiovana.
Ny tokony hosoritana ihany koa dia ny fomba nanosehan'ny programa ireo mpisolovavan'ny [fikambanana] tsy mitady tombontsoa sy mpisolovavan'ny fifindramonina handrisika ireo olona arovany hivoaka ny aloky ny fiafenana, hametraka ny fitokisany amin'izy ireo sy ny governemanta, ary avy eo milaza ny mombamomba azy ireo ho takalon'ireo lazaina fa tombontsoa azo amin'ny fifindramonina. Tsy mampisalasala ahy ny finiavana tsara ao amin'ireo mirotsaka hanao izany ezaka izany, saingy misy ambaratongan'andraikitra tazonin'ireo mampanao ho ara-dalàna ireo politika ireo—ireo tsy mitady tombombarotra izay manohana ara-bola ny asa eny an-kianja, ary ireo mpisolovavan'ny fifindramonina izay andoavam-bola amin'ny fikarakarana ireo raharaha [ara-pitsarana].
Ireo no fanontaniana sarotra tokony nanontaniantsika rehetra niangarana manokana amin'izao rafitra izao, indrindra rehefa ifanotofan'ny tombombarotra, famatsiana ara-bola ary mpanao lalàna mivantana na ankolaka na manitsy ny andrim-panjakana, ny hevitra sy ny lahateny ifampiresahana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanolokoloana zana-bondrona mendrika ampiana, jerena ny mahaolona azy ary tohanana [maharitra].
Amin'izao fotoana izao, ny fifindramonina no misongadina, na mety iadian-kevitra ihany aza izany, ho ahitana olana lehibe indrindra amin'ny fanajana ny zon'olombelona, ary ny lalànan'ny fifindramonina ihany no lalàna iraisampirenena azo tsapain-tanana sy azo ampiharina hita ao amin'ny boky. Ireo ihany no lalàna afa-miitatra mivoaka ny sisintanim-pirenena ary hita ny fiantraikany. Ny mamantatra sy ny mahatakatra izay tsy mihetsika no tokony mampahafantatra antsika ny tetikadintsika sy ny laharam-pahamehantsika.
Mbola tarihin'ny fifandroritana ny fiovana sy ny fivoarana ao anatin'ny fiarahamonin'i Etazonia, ary ohatra manome lesona antsika amin'izany ny raharaham-pifindramonina. Mety ho hafahafa, saingy afa-miady hevitra ny tsirairay fa ny fandraràna ny Miozolomana tsy hiditra an'i Etazonia sy ny fampitsaharana ny DACA no nandranitra ny fahaizan'ny olona hahatsikaritra ny antsipirihany sy ny fahasamihafan-teny eo amin'ny resaka fifindramonina sy ny fifaningorany amin'ny lalàna sy ny toekarena.Tafiditra ao anatin'izany ny fantsona lehibe mampitohy ny sisintany mankany amin'ny fonja toa tsy tsikaritry ny ato amin'ity firenena ity, sy ny fifamatorana sarotra vahàna misy eo amin'ny asam-pifonjana sy ny fifindramonina.
Matetika arahim-pijalian'olona maro ny fiovan-teny. Efa 30.000 ny isan'ny ankizy miampita ny sisintanin'i Etazonia miandry fombafombam-pitsarana handroahana azy ireo vao nanomboka ny adihevitra amin'ny tokony hahazoan'ny karazan'olona sasany torohevitra ara-pitsarana na karazan'endriky ny zavatra tokony atao mandritra ireny fotoam-pitsarana ireny. Tsy hafa amin'izany ny krizy ao Eoropa amin'ny resaka fifindramonina.
Mahavonjy ihany anefa ny manakatra ireo krizy sy fanamby ireo tsy hoe faharesena, fa anisan'ny tolona ho amin'ny zon'olombelona mivoatra sy manana fomba itenenana azy. Ny dikan'izany dia hoe mahatakatra ny fiantraikan'ireo politika ireo amin'ny ankapobeny sy manoritra ny filàna fitadiavam-bahaolana tsy mampisara-bazana antsika, ary mijery ny tombondahiny sy ny tombontsoa tsy ekentsika ampifandraisina amin'ny toe-draharaha ankehitriny.